Amiir Charles wuxuu muddo dheer ka baqay Andrew saaxiibtinimada uu la leeyahay Epstein - dadku - TELES RELAY
ACCUEIL » DADKA & LIFESTYLE Amiir Charles wuxuu muddo dheer ka baqay Andrew saaxiibtinimada uu la leeyahay Epstein - dadka
Amiir Charles wuxuu muddo dheer ka baqay Andrew saaxiibtinimada uu la leeyahay Epstein - dadka
Boqoradda Elizabeth laga yaabee inay iibsato sheegashada Amiir Andrew ee ah inuusan la yeelan laheyn saaxiibtinimada galmada ee 17 sanadihii hore ee saaxiibkiisa Jeffrey Epstein, oo ay ku farxi karto inay ka qosliso kaamirooyinka inta Waxay raacday wiilkiisii ​​curadka ahaa ee 59 sano wuxuu kaniisadda galay Axadda.
Laakiin Amiir Charles, wiilkiisa curadka ah iyo dhaxalka boqortooyada, kuma faraxsana in Andrew uu qoyska boqortooyada u jiiday waalli Epstein oo dhan, waxaa wariyey Vanity Fair . Andrew saaxiibtinimadiisii ​​Epstein muddo tobanaan sano ah ayaa sii xoogeystey usbuuca dhammaadka, markii milkiiliye u dhashay iyo milkiilaha dhaqaalaha lagu eedeeyay ka ganacsiga galmada ayaa laga helay isagoo u muuqda inuu isdilay qolkiisa xabsiga. Manhattan.
Amiir Andrew iyo goor dambe Jeffrey Epstein. Sawirro laga soo qaaday Getty Images iyo Xafiiska Sheriff ee Palm Beach County.
"Andrew wuxuu ku soo dhoweeyay Epstein Windsor Castle, Sandringham iyo Balmoral waqtiyo kala duwan oo saaxiibtinimadooda ah, taasoo dhalisay xiisad udhaxeysa isaga iyo Charles," illaha boqortooyada Katie Nicholl ayaa u sheegay weriye Royal Vanity Fair.
“Charles wuxuu ka carooday Andrew asxaabtiisa badan iyo kuwa ay is wada barteen sanadihii la soo dhaafay, Epsteinna kama duwana,” ayaa lagu yiri warka. "Waxaa la ii sheegay inuu aad uga walaacsanaa saaxiibtinimada muddo dheer una arkay inay tahay musiibo soo socota."
Marka, iska illow Meghan Markle oo daabacda nooca Ingiriisiga ah ee Vogue ama warbixinno tabloid kale oo ku saabsan iyada, Amiir. Harry, Amiir William iyo Kate Middleton waxay khalkhal gelinayeen heshiisyada, iyagoo ku doodaya in midkoodna uusan awoodin ama u hoggaansamin shacabka.
Fadeexada boqortooyada dhabta ah - fadeexada boqortooyada ee aadka u daran - waxay qusaysaa Duke of York, oo lagu naaneeso "Randy Andy" muddo dheer. oo ay qortay saxaafadda Ingiriiska iyo cidda u noqon lahayd wiilka boqoradda.
Tan iyo 2011, Andrew waxaa lagu eedeeyay inuu galmo la sameeyay Epstein's addoonsiga galmada, Virginia Roberts Giuffre, horaantii 2000 sano. Giuffre waxay ka marag kacday in markii ay yaraa, ay shaqaalaysiisay saaxiibtiis hantiwadaag ah oo Epstein ah, Ghislaine Maxwell oo ahayd maktabadda Donald Trump ee Mar-a-Lago oo ay dooneysay in ay noqoto dhillee yar oo ay leedahay galmo la yeelo. saaxiibada. Giuffre wuxuu ku eedeeyay Andrew inuu ka mid ahaa kuwa ka faa iideysta adeegyadan seddexdii kulan ee New York, London iyo dhismaha gaarka loo leeyahay ee Epstein ee jasiiradaha Virgin.
Queen Elizabeth II iyo Amiir Andrew waxaa laga saaray Kaniisadda Crathie Kirk taas oo sabab u ah adeegga Agoosto 11 ee u dhow Balmoral Castle. (Sawirka Duncan McGlynn / Getty Images)
Eedeymaha loo soo gudbiyey Andrew wuxuu gaadhay heer cusub oo deg-deg ah bishii hore, ka dib markii la xirey dembiilaha galmada oo laga duubay eedeymo cusub oo ah ka ganacsiga galmada.
Bogagga 2 000 ee dukumiintiyada maxkamadda ee hore loo shaabadeeyay. Dukumentiyada faahfaahin dheeraad ah shaaca ka qaaday safarradii Andrew ee Epstein, wuxuu la wadaagay sawir Andrew gacantiisa ku wareegsan Giuffre, ka dibna da'da 17 sano, wuxuuna bixiyay maragfurka eedeeyaha labaad. Johanna Sjoberg ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtey in Andrew nuujiyey naaska oo uu sameeyey galmada iyada iyo Giuffre oo wata puppet u eg isaga markii ay ku sugnaayeen Epstein Manor ee Manhattan ee 2001.
Dhimashadii Sabtiga ee Epstein ayaa ruxday meelihii ay ku yaalliin badweynta Hindiya. FBI-da ayaa baaraysa sida maxbuuska ugu caansan ee Mareykanka aan si dhow loola socon, iyadoo xeer ilaaliyeyaasha federaalka ee ku sugan Koonfurta Magaalada New York ay wacad ku mareen inay sii wadi doonaan baaritaanka lagu soo oogay. ka ganacsiga dadka ujeeddooyin galmo ah iyadoo diiradda la saarayo la-hawlgalayaasha lagu eedeeyay. 19659002] Taasi waxaa ku jira Maxwell, taas oo sida uu sheegayo Daily Beast ay saaxiibo wanaagsan Andrew iyo inta badan lagu casuumay gurigiisa oo ku yaal Buckingham Palace. Daily Beast ayaa sidoo kale soo xigatay ilo laga soo xigtay in Maxwell uu dumar ka helay London si uu Andrew u galmoodo.
Amiir William, Amiir Andrew, iyo Prince Charles ayaa yimid Westminster Abbey oo loogu talagalay aaska Boqoradda, 9 APRIL 2002. . (Sawir qaade Michael Crabtree / Getty Images)
Dhowr xubnood oo Boqortooyada Midowday ah ayaa codsaday weydiin baaritaan ku saabsan saaxiibtinimada Duke ee Epstein. Vanity Fair wuxuu yiri tani waxay tilmaan u tahay sida eedeynta Andrew "aan loo tirtiri karin" - sida boqoradda iyo xubnaha kale ee qoyska boqortooyada ay jeclaan lahaayeen - oo "baalal dillaacay" ugu sareeya heerarka dowladda Ingiriiska.
Isniinta, Andrew wuxuu ku maqnaa fasax Boqoradda, Prince Philip, afadiisii ​​hore Sarah Ferguson iyo xubnaha kale ee qoyska ee Balmoral, oo ah gurigiisa ku yaal Highlands-ka Scotland, sida laga soo xigtay laga soo xigtay Daily Mail . Wuxuu yimid Aberdeen Airport asbuucii hore diyaarad khaas ah waxaana loo qorsheeyay inuu usbuucii oo dhan ku qaato Balmoral. wuxuu duulay Isniinta.
Markii la maqlay warka sheegaya dhimashada Epstein, duke ma uusan lahayn "wada hadallo fudud hooyadiis iyo aabihiis," ilo ayaa u sheegay Vanity Fair.
“Laakiin wuxuu mar walba ku adkeystaa inuusan sameyn wax qalad ah oo eedeymahaas ay yihiin marin habaabin,” isha ayaa raacisay Vanity Fair. "Waalidkiis way rumaysteen."
Laga yaabee tani waa sababta ay Boqoraddu ay diyaar ugu tahay inay weheliso kaniisadda subaxnimada Axadda iyo inay u keento dhoola cadeyn weyn oo ku fadhida gadaasha gaariga.  "Tan waxaa loo fasiray qaar ka mid ah ficil diidmo ah, taasoo carqalad gelisay qaar kamid ah boqorada, iyagoo leh waa xukun xun oo ay qaadday boqoradda," ayay tiri Vanity Fair.
Amiir Andrew wuxuu dhoola cadeynayaa Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo Westminster Dean John Hall booqashada Westminster Abbey ee 03 June 2019 ee London. (Sawir waxaa leh Jeff J Mitchell / Getty Images)
Charles wuxuu sidoo kale Balmoral la joogay xaaskiisa Camilla, Daily Mail ayaa werisay. Waxay sidoo kale galeen kaniisadda Axadda, laakiin si gooni gooni ah ayey u wadaan.
Vanity Fair iyo meelaha kale ee laga soo wariyey waxay sheegeen in Charles uu muddo dheer ka daalay laxiriirta walaalkiis. Muddo sannado ah, Andrew, oo mar ahaan qurxoonaa, wuxuu ku caanbaxay sharaf iyo muhiimad shaqsiyan, taasoo had iyo jeer ka dhigaysa inuu ku qoslo bulshada Ingiriiska. ayaa soo sheegay Daily Beast ee 2018. Wuxuu sidoo kale ku dhacay wixii 'Fairity Fair' in 2011 loo yaqaan qaab nololeed kala-baxa iyo caado ah soo jiidashada saaxiibtinimada iyo doorka maaliyadeed ee shakhsiyaadka caalamiga ah oo ah wax karaahiyo ah sida Epstein.
Eedeymaha Giuffre waa la cadeeyay. wareysi lala yeeshay Daily Mail bilowga 2011 . Isla waqtigaas, ayaa sawirrada duke ay soo muuqdeen, iyagoo la socda Epstein oo ku yaal Bartamaha Park
Dhanka kale, Ferguson waxaa lagu qabtay cajalad uu ku dalbanayo 821 $ 000 saxafi qarsoon oo labisan sida ganacsade bedel u ah Andrew, ayuu qoray wargayska Vanity Fair. Waxay sidoo kale lagu qasbay inay si rasmi ah u raali galiso ogolaanshaha Andrew inuu ka helo wax ka badan 18 000 USD ka Epstein si ay uga caawiso inuu deynta deyn kuxigeenkiisii ​​hore.
Fadeexadahan ayaa kiciyay carada saxaafada Ingriiska iyo Aqalka Guud ee 2011. - Boqoradda, Vanity Fair iyo meelaha kale ee laga soo warbixiyay. Cadhada ayaa Andrew ku kaliftay inuu ogolaado inuu ka tago shaqadiisa uu jecel yahay oo caan ku ah inuu noqdo wakiilka gaarka ah ee UK ee ganacsiga caalamiga ah iyo maalgashiga.
Tan iyo markaas, Andrew iyo qaar ka mid ah xubnaha qoyska boqortooyada waxay ku dadaalayeen inay soo celiyaan muuqaalkiisa. oo dib ugu soo celi wareega adag ee "Team Windsor," ayaa soo wariyay Daily Mail in 2017 . Isaga oo adeegsanaya asxaabtiisa, Andrew wuxuu qiray inuu "doqon" ka yahay saaxibtinimada uu la leeyahay Esptein wuxuuna qirtay in eedeynta "ay aad uga xun tahay" qoyska boqortooyada. ayuu wariyay Telegraph .
Isla mar ahaantaana, Charles iyo Andrew waxay isku khilaafeen aragtida ah mustaqbalka madaxweynaha reerka boqortooyada ee la soocay ee qarnigii XNIXX, waxaa qoray Daily Beast in 2017. Himiladaan macnaheedu waa dhigista caanka ah ee William, Kate, Harry iyo Meghan xarunta dhexe ee munaasabadaha boqortooyada - ma ahan Andrew ama gabdhihiisa, Beatrice iyo Eugenie.
Toddobaadka dhammaadkiisa, Buckingham Palace wuxuu ku celinayaa diidmadiisa, isagoo qiraya in Andrew mar ahaa saaxiibo Epstein, laakiin wuxuu dafiray inuu sameeyay wax sharci darro ah.
Bayaankan ayaa lagu beeniyay in Duke of York uu leeyahay wax xiriir ah oo galmo ah ama xiriir uu la leeyahay Virginia Roberts, ayaa lagu yiri war saxaafadeedka. "Qoraal kasta oo lid ku ah waa been abuur aasaasi ahna ma leh."
Laakiin illaa iyo imminka, diidmadaasi uma ay oggolaan Andrew inuu ka dambeeyo warbixinnada dembiyada la sheegay in ay geysteen Epstein.
Marka la eego Andrew booskiisa sare ee qoyska boqortooyada, "qaar ayaa dareensan in duke ay tahay inuu sharxo saaxiibtinimadiisa u doodaha jinsi ee dhintay," Vanity Fair ayaa werisay. Isha boqortooyada ayaa intaa ku dartay, "sheekadan ma dhammaan doonto, lamana yaqaan waxa gadaal ka soo bixi doona."
Dadku: "Way kaa qabaneysaa": ina Alain Delon wuxuu la wadaagaa sawirkii ugu horreeyay ee aabihiis tan iyo dhiig-baxa maskaxda
Bella Thorne waxay heysataa xanaaq badan: waxay sameyn doontaa Pornhub
Hoos u dhig d
Celine Dion shaki ayey ku jirtay intii ay ku jirtay riwaayadeedii ugu dambeysay: "Waxaan dareemay xoog wali"
Arooska Princess Beatrice: Muxuu Bea u ilaaway Kate Middleton iyo Eugenie?
Hindiya: Hindiya waxay ka shaqeysay aasaasiga, laakiin waxaa weli jira dhibaatooyin la xallin karo: IMF | Wararka Hindiya
Martida RTL Petit Matin ee 18 Oktoobar 2019 - VIDEO
DADKA & LIFESTYLE6,197
Video dheeraad ah2,689